Turkiga oo xiray 31 xubnood oo looga shakisan yahay inay ka ti... | Universal Somali TV
Turkiga oo xiray 31 xubnood oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish.
Bilayska Turkiga ayaa xiray 31 xubnood oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Islaamiga ah ee Daacish magaalada Istanbul kuwaas oo isku diyaarinaya inay weerar geystaan, sidaana waxa sheegay wakaaladda wararka ee Anadolu news agency.
Bilayska ayaa lix weerar ku qaaday saddex degmo oo magaalada ka mid ah, ayaa lagu yiri Anadolu, iyada oo aan sheegin faahfaahin ku saabsan markii howlgaladu socdeen. Dhammaan dadka la xiray waxay ahaayeen ajnebi, ayay wakaaladdu ku dartay.
Saraakiisha ayaa goobaha ay weerareen kasoo helay qalab dijitaal ah iyo dukumentiyo intii lagu jiray hawlgalka, ayuu sheegay Anadolu.
Turkiga ayaa iskaashi kala dhaxeeya Isbahaysiga U.S ee ka soo horjeeda dagaalyahannada Islaamiga ah.
Bilayska Turkiga ayaa xoojiyay howlgallada dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Islaamiyiinta dhammaadkii sannadkii hore ka hor sannad-guuradii ugu horreysay ee weerarkii lagu qaaday dabaaldegii sanadka cusbaa goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul halkaas oo ay ku dhinteen 39 qof.
Dawladda Islaamiga ee Daacish ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarrkan, oo ka mid ah weerarro taxane ah oo la rumaysan yahay in ay fuliyeen jkooxaha argagaxisada gudaha Turkiga sannadihii la soo dhaafay.
Kan-xigaMadaxa ciidamada Bilayska dalka Kenya...
Kan-horeHay&#039;adda Qaxootiga ee Qaramada M...
Madaxweynaha Jarmalka oo booqasho sadex maalin ah uga bilaabatay Koonfur Afrika
41,764,774 unique visits